Racfaan Uga Qaadashada Macaashka Dadaweynaha Maxkamadda Degmada | LawHelp Minnesota
Racfaan Uga Qaadashada Macaashka Dadaweynaha Maxkamadda Degmada
Xogtan urursan waxaa loogu talo galay oo KALIYA dadka horey uga qeyb qaatay dhageysiga dadweynaha u furan ee gargaarka dadweynaha ee waaxda Adeegga dadweynaha ee loo soo diray go’aan ama amar. Racfaan u qaadashada Maxkamadda Degmada waa mid aad u cakiran. Waxaa wanaagsan in aad qareen qabsato ama caawinaad aad ka hesho adeegga maxkamadda.
MA AHA lambarka bulshada, ceymiska shaqo la’aanta ama dib u eegis lagu sameeyo dacwad ku saabsan diidmada adeegga ama gargaarka.
Haddii ay dacwadaadu ku saabsan tahay cabasho aad ka cabaneyso gobolka Minnesota oo si xun kuula dhaqmay, akhri xogta urursan ee Waa Maxay Si Xun Ula Dhaqanka Sidee Ayey Saameyn Ugu Yeelan Kartaa Shaqadeyda?
Maxaan yeelayaa haddii aanan ku raacsaneyn go’aanka ay gaaraan DHS?
Haddii ay dhageysi kuu qabteen DHS oo go’aanka ama amarka ay soo saareen aadan ku raacsaneyn waxyaabo dhawr ah ayaad sameyn kartaa. Waxa aad xafiiska racfaanka wweydiisan kartaa in ay eegaan go’aankooda. Taas waxaa lagu magacaabaa dib u tixgelin . Akhri xogta urursan ee Racfaanka Gargaarka ee DHS si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dib u tixgelinta.
MUHIM: Waajib kuguma aha in aad weydiiso dib u tixgelin haddii aad dooneyso in aad Maxkamadda Degmada racfaan u qaado si toos ah. Laakiin labada mar qura ma wada sameyn kartid. HAKA diiwaangelin maxkamadda racfaan haddii aad weydiisatay in dib loo eego. Waa in aad sugtaa ilaa aad jawaab ka hesho dib u tixgelinta.
Haddii aad horey u soo martay dib u tixgelinta oo aadan weli ku raacsaneyn go’aankooda AMA aad dooneyso in aadan weydiisan dib u tixgelin, racfaan ayaad uga qaadan kartaa maxkamadda degmada.
Fiiro gaar ah: Maxkamadda Degmada waa maxkamadda ku taal degmada aad degan tahay.
Racfaan miyaan ka qaataa?
Haddii aadan ku raacsaneyn go’aanka ka dib dhageysiga dib u tixgelinta, haddii aad dooratay in aad weydiisato dib u tixgelin, waxa aad racfaan u qaadan kartaa Maxkmadda Degmada. LAAKIIN U FIIRSO-inta badan dacwadaha lagu guuldareysto dhageysiga DHS ma aha kuwo ku wanaagsan racfaan ka qaadasho. Racfaanka Maxkamada Degmada laguma helo ra’yi cusub. Kuuma ogolaaneyso in aad dhageysi cusub dib u soo bilowdo.
Maxkamadda Degmadu waxa ay eegtaa oo kaliya khaladaad waaweyn dhacay oo wax ka bedeli kara go’aankii hore. Hadii racfaanka DHS uu u dhaco si cadaalad ah iyo sida sharcigu dhigayo, Maxkamaddu Degmadu ma bedesho go’aanka.
Racfaaan ka qaado oo kaliya haddii:
Ay jirto sabab sharci ah. Sida inaad soo bandhigi karto in go’aanka DHS yahay mid aan sharciga la raacin.
Aad heyso cadeyn cusub. LAAKIIN waa in ay jirtaa sabab muujineysa in cadeynta aadan heysan amarkii hore.
Sababtaas darteed, isku day in aad la tashato qareen ka hor inta aadan racfaan ka diiwaan gelin Maxkamadda Degmada. In aad la tashato waxa ay ku caawineysaa marka aad dacwad xoog leh heysato oo racfaan loo qaadan karo. Waxa kale oo qareenku kaa caawinayaa inuu kaala taliyo in aad racfaan qaadato iyo in kale.
Xafiiska Gargaarka Sharciyada ee degaanka ayaa ku siin karo talo ama meel aad talo ka hesho. Si aad u hesho Xafiiska Degaanka ee Gargaarka Sharciyada, soo booqo www.LawHelpMN.org, hoos u raac “Qareenada iyo Xafiisyadooda.”
Waa maxay dacwadda racfaanka ku wanaagsan?
Dood Xagga Sharciga Ah: si aad ugu guuleysato racfaanka Maxkamadda Degmada waa inaad soo bandhigtaa in amarka DHS uu yahay mid aad sax aheyn maadaama la adeegsaday sharciyo aan xaaladda ku habooneyn ama aysan jirin cadeyn ku saleysan xaqiiiqada oo u taagan waxyaabaha dhacay.
Cadeyn Cusub: haddii aad heyso cadeyn cusub OO ay jirto sabab macquul ah sababta aadan u soo bandhigin dhageysigii ugu horeeyey oo laga yaabo in ay kaa caawin laheyd in aad ku guuleysato dacwada. Sida haddii aadan ogeyn in ay jiraan qoraalo caawin kara dacwadaada markii ugu horeysay laakiin aad iminka heysato.
Tusaale wanaagsan oo dacwadaha laga qaadan karo racfaanka waxaa ka mid ah:
Waxaa laguu diiday adeegga caafimaadka ama qalab uu dhakhtarkaagu kuu qoray. Qaaliga ayaa kuu sheegay in sababta loo diiday ay tahay dhakhtarka oo aan buuxin foomkii saxa ahaa ama aan foomka oo dhan si sax ah u buuxin. Markan waxa aad heystaa foomkii saxa ahaa ama foomkii si wanaagsan loo buuxyiyey.
Waa maxay dacwadda racfaanka aan ku wanaagsaneyn?
Waxaa jira dacwado sharcigu cad yahay inkasta oo laga yaabo in ay cadaalad daro kuula ekaato. Dacwadaha aan ku wanaagsaneyn racfaanka waxaa ka mid ah:
Tusaale dacwadaha aan racfaanka ku wanaagsaneyn waxaa ka mid ah:
Sharcigu waxa uu dhigayaa in aad racfaan ku qaadato 30 maalmood gudahood. Waxa aad racfaanka ku qaadatay 40 maalmood. Qaaligu wuxuu kugu yiri ma heysatid sabab wanaagsan marba haddii aad daahday.
Waxaa wanaagsan in aad la tashato qareen. Qareen aqoon u leh gargaarka dadweynaha ayaa ku siin kara talo xagga sharciga ah iyo haddii aad heysato sabab wanaagsan.
Intee in le’eg ayaan ku qaadan karaa racfaanka? – Taariikhda Ay Ku Egtahay Racfaanka
Amarka ugu dambeeya ee uu soo saaro Gudoomiyaha DHS waxaa laguugu soo diraa boostada, waxa aad heysataa 33 maalmood laga bilaabo taariikhda amarka. Tani waxaa la mid ah haddii uu yahay amarkii ugu dambeeyey laga soo bilaabo dhageysiga koowaad ama amarka dib u qiimeynta.
Haddii gacanta lagaa saaray amarkii ugu dambeeyey, waxa aad heysataa 30 maalmood laga soo bilaabo amarka racfaan qaadashada.
Maxaa kale oo la iga doonayaa in aan ka fikiro ka hor inta aanan diiwaangelin racfaanka?
Xusuusnoow in Maxkamadda Degmada ay talaabo qaadi karto oo kaliya haddii aad racfaan qaadato. Looma qabanayo dhageysiga si aad u soo bandhigto mar kale cadeynta oo dhan. Waxaa laga yaabaa in maxkamadda degmadu eegto cadeymaha cusub LAAKIIN kaliya haddii cadeynta cusub aysan aheyn mid la heli karay markii uu socday dhageysiga DHS oo ay jirto sabab macquul ah. Maxkamaddu waxa ay inta badan eegtaa haddii sarkaalka dhageystay dacwada uu sharciga si sax ah u adeegsaday.
Maxkamadda degmadu waa in ay raacdaa go’aanka DHS haddii aysan cadeyn cad oo muujineysa in uu khalad dhacay. Taas weeye sababta ay mar kasta u adag tahay in racfaanka wax looga bedelo amarka.
Haddii aadan qabsan karin qareen, waa in aad weli raacdaa nidaamka u degsan maxkamadda. Waxa aad weydiisan kartaa caawinaad xafiiska adeegga dadweynaha ee maxkamadda degmada. La socodsii in aad dooneyso in aad racfaan ka qaadato go’aanka DHS. Waxaa jira sharciyo u gaar ah. Ha hilmaamin in ay jirto taariikh u go’an racfaan qaadashada! U weydiiso caawinaad sida ugu dhaqsaha badan.
Talaabooyinka Racfaan U Qaadashada Maxkamadda Degmada
1.	Buuxi “Ogeysiiska Racfaan Qaadashada” ee ku lifaaqan
Buuxi “Ogeysiiska Racfaan Qaadashada” ee ku lifaaqan ama qor qoraal aad adigu qortay ee “ogeysiiska Racfaanka” oo aad ku weydiisaneyo. Haddii aad waraaq u qorto, waa in aad xaqiijisaa in aad macluumaadkan ku soo darto:
Hay’adda degmada ee diiday codsigaaga.
Goorta la qabtay dhageysigaaga (bisha, maalinta iyo sanadka)
Taariikhda amarka diidmada ah uu ku soo gaaray.
Haddii aad codsatay ama aadan codsan dib u tixgelin.
Haddii aad codsatay dib u tixgelin, taariikhda amarka.
In aadan ku raacsaneyn amarka.
Sababta aad u aaminsan tahay in amarka wax laga bedelo. Qor waxyaabaha aad is leedahay DHS way ku khaldan tahay ama faahfaahin ka bixi cadeynta cusub iyo sababta aadan u heysan markii hore.
Soo raaci “Codsiga Qoraalka Dhageysiga.” Raac sida uu u qoran yahay foomka ku lifaaqan. Waxaa muhim kuu ah in aad hesho qoraalka dhageysiga iyo qoraalada kale ee dhageysiga. Qoraalka dhageysiga waa lacag la’aan haddii aad racfaan qaadaneyso haddii aanu racfaankaagu aheyn in si xun laguula dhaqmay.
Haddii aad dooneyso in dhageysi laguu qabto
Qor magacaaga oo sadexan iyo cinwaankaaga oo soo raaci telefoonkaaga iyo iimeylkaaga.
Ku qor taariikhda oo saxiix.
2.	Ku soo lifaaq:
Nuqul (koobi) amarka Waaxda Adeegga Dadweynaha
Nuqul amarka Dib U Tixgelinta haddii uu jiro.
Nuqul cadeynta cusub haddii aad heyso
Sawir ka sameyso warqadaha oo dhan inta aadan soo gudbin. Nuqul u dir DHS, dhinac sadexaad oo dacwadda qeyb ka ah haddii uu jiro adiguna nuqul ka reebo.
Warqadahaaga u bandhig adeegga maxkamadda ee laga caawiyo dadweynaha si ay u eegaan ka hor inta aadan ka diiwaan gelin maxkamadda. Si aad u hesho maxkamadda degmada soo booqo www.mncourts.gov oo guji “Find Courts” ka dibna guji magaca degmada aad degan tahay.
3.	Waa in aad (“gaarsiisaa”) dhamaan dhinacyada kale (tasoo lagu magacaabo cadeynta gaarsiinta)
“Gaarsiinta” waxaa loolajeedaa in boostada loogu diro ama gacanta laga saaro warqadaha racfaanka dadka kale ama hay’adaha qeybta ka ah dacwadda. Dhamaan hay’adaha ku xusan amarka kama dambeysta ah ee DHS waa in la gaarsiiyaa dhamaan qoraaladda aad maxkamadda ka diiwaangelisay oo isku mid ah.
Gaarsiinta waxa ay noqon kartaa
Boostada loo dhigo - boosatada caadiga ah ee tigidh lagu dhajiyo
Gacanta laga gaarsiiyo - haddii aad dooneyso in aadan lacag ku bixin in aad
boostada ugu dirto dhinacyada kala duwan.
4.	Foomka “Cadeynta Gaarsiinta” oo la buuxiyey ayaa lagu soo celiyaa maxkamadda. Foomkani waxa uu cadeyn u yahay taariikhda warqadaha boostada la dhigay ama gacanta laga saaray.
Waxaa lagaa doonayaa in aad maxkamadda u cadeyso in warqadaha dacwadda la gaarsiiyey dhinacyada kale. “Cadeynta Gaarsiinta” ayaa ah sida aad ku cadeyn karto. Si aad u hesho foomka soo booqo www.mncourts.gov
Guji “Get Forms” ee jadwalka kore
Guji “Service of Process (Gaarsiinta Adeegga)” ee liiska
Guji “Affidavit of Service – Combined (Gaarsiinta Adeegga - guud)”
La soo deg foomka isaga oo ku qoran Word ama PDF.
Maxkamaddu waxa ay dooneysaa in ay aragto in dhinac kasta la gaarsiiyey. Taas waxa aad ku qori kartaa hal cadeyn oo gaarsiin ah oo aad ku qorto mid kasta magaciisa iyo cinwaankiisa. Ama waxa aad u sameyn kartaa mid kasta qof kasta gooni ahaantii ama hay’ad kasta goonideed.
Warqadaha waxaa lagu diri karaa boostada ama gacanta laga saari karaa LAAKIIN qofka diraya ama gacanta ka saaraya waa inuu saxiixaa “Affidavit of Service (Adeegga Gaarsiinta).”
5.	Ka diiwaangeli racfaanka iyo cadeynta gaarsiinta Maxkamadda Degmada.
Ka diiwaangeli Maxkamadda Degmada qoraalka asalka ah “Ogsiiska Racfaanka”, mid kasta oo ka mid ah “Adeega Gaarsiinta” oo dhamaantood la isku lifaaqay. Kala soo bax cinwaanka maxkamadda ee www.mncourts.gov. Ka dooro “Find Courts (raadi maxkamadda)” ka dibna geli degmada aad degan tahay.
Lagaama doonayo lacagta diiwangelinta haddii aadan racfaan uga qaadaneyn dayac ama xad gudub laguu geystay.
Waxaa DHS kaa soo gaaray qoraaladii aad u codsatay dhageysiga (qoraalkii dhageysiga, iyo warqadihii kale. Waxa lagu soo diraa boostada. Waxa ay mararka qaarkood qaadataa ilaa 30 maalmood in ay ku soo gaaraan.
Waxa aad waraaq ka heshay Maxkamadda Degmada oo lagu wargelinayo in qaaligu dacwadaada go’aan ka gaarayo iyo lambarka dacwadda.
Haddii aad adiga ama hay'adaha kale aad weydiisateen in la qabto dhageysi, waxa ay qaadaneysaa ilaa 30 cisho ka dib marka uu idin soo gaaray qoraalka dhageysigii DHS si balan la idinkaga qabto Maxkamadda Degmada. La xiriir xafiiska Maamulaha Maxkamadda haddii aad wax su’aal ah ka qabto balanta maxkamadda.
Haddii aanay cidina weydiisan in dhageysi la qabto, qaaliga ayaa eegaya dacwadaada oo go’aan ka gaaraya 90 cisho gudahood.
Hadii aad su’aal ka qabto sida ay dacwaddu u socoto, la soo xiriir xogheynta qaaliga. U sheeg lambarka dacwadda marka aad la soo xiriirto.
FIIRO GAAR AH: La soco warqadaha lagaaga soo diro maxkamadda degmada. Si taxadar leh u akhri! Maxkamadda Degmada la socodsii cinwaanka warqadaha laguugu soo diri karo. Haddii aad guurto, la socodsii Maxkamadda Degmada markiiba adiga qoraal ahaan ugu dir cinwaanka cusub iyo lambarka dacwadda.
Maxaan yeelayaa haddii la qabanayo dhageysi maxkamadeed?
Haddii adiga iyo hay’adaha kale aad weydiisaneysaan dhageysi maxkamadeed, Maxkamadda Degmada ayaa idiin soo direysa waraaq la idinku wargelinayo taariikhda dhageysiga. Waa muhim in aad tagto oo ka qeyb qaadato dhageysiga. Haddii aadan tagin dhageysiga, waxaa suurogal in qaaligu baabi’iyo racfaankaaga.
Dhageysiga, waxa aad fursad u leedahay in aad qaaliga u soo bandhigto waxyaabaha aad is leedahay amarka DHS wuu ku khaldan yahay. Waa arrrin wanaagsan in aad sii diyaarsato oo qorato fikradahaaga iyo waxyaabaha aad dooneyso in aad qaaliga u sheegto. Fikradaha aad qorato horay u sii qaado. Xusuusnoow in aad heysato muddo gaaban oo aad ku sharaxdo mowqifkaaga. Soo gaabi kana hadal nuxurka dacwadda.
Maxaan yeelayaa haddii aanan ku guuleysan Maxkamadda Degmada?
Dhageysiga ka dib, Maxkamadda Degmada ayaa kuu soo direysa nuqul ka mid ah go’aanka qaaliga. Haddii aadan ku raacsaneyn waxa aad racfaan uga qaadan kartaa Maxkamadda
Racfaanka ee Minnesota. La tasho qareen sida racfaanka loo qaato. Waxaa jira taariikh u go’an qaadashada racfaanka, sidaa darteed qareen la tasho sida ugu dhaqsaha badan.